umdlalo wekhibhodi wegundane combo - MEETION
umdlalo wekhibhodi wegundane combo
Usendaweni efanele ye- umdlalo wekhibhodi wegundane combo.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe MEETION.siqinisekisa ukuthi kulapha MEETION.
Umkhiqizo ungu-100% onobungane besikhumba futhi uphephile. Ngesikhathi sesigaba sokukhiqiza, izinto eziyingozi ezingadala ukucasuka kwesikhumba zisuswe ngokuphelele..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu umdlalo wekhibhodi wegundane combo.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
I-USB Computer Optical Wirempical Mouse 1600 DPI Mouse m362
Into Cha: MT-M362Brand: umhlanganoUmbala: mnyamaUkutholakala: EsitokoIncazelo: Ukushintshwa kwe-DPI okuguqukayo, i-anti-slip Rubber Scroll Wheel, ipulaki futhi udlale.
Ikhibhodi ye-UnBonseng-Meention MK80 RGB Backlit Mechanic Mechanical Ikhibhodi 丨 Imihlangano
]Ikhibhodi ye-chocolate eluhlaza okwesibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka Imodi engu-20 i-RGB Colorful Backlit Ukukhetha okuphelele kokubili umdlalo kanye #Office. I-Blue switch switch yomzimba we-shaft ngezici zekhibhodi #Mechanical yekhibhodi. Kokubili umsindo futhi isandla sizizwa ungathola uhlobo olukhethekile lwenjabulo. Hhayi ukugembula kuphela kodwa futhi nehhovisi. Imisindo ye-RISP kanye nemigqila izwakala kahle. ◆ izinkinobho ezigcwele anti-ghosting, zikwenze udlala yonke imidlalo kalula futhi ngokukhululeka. ◆ ukukhanya okuphelele kwe-backight, uzizwe wesandla esihle. Amaqembu angu-12 we-Multimedia Shortcut Keys, ashintshe imisebenzi yokubuka ngomsindo ngokukhululeka, futhi ujabulele impilo yakho ngokuzijabulisa. Nomaphi lapho noma kuphi ekhaya lokuzijabulisa, ukuthayipha kwamahhovisi, umdlalo noma ukuncintisana. Ungenza noma yini oyifunayo.
I-MAXION PD121 Long RGB Gaming Mouse Pad
]Vikela ideski lakho - i-pad yethu yegundane ayigcini nje ngokusebenzisa ama-gamers, kepha futhi ilungele abasebenzi basehhovisi; Indawo enkulu eyanele ukuhlinzeka indawo enhle yekhibhodi negundane; Izinto ezingezona ezingezona zikusiza ukuba unamathisele ikhibhodi yakho& Igundane lapho kufanele libe khona, futhi linganciphisa ukuxabana phakathi kwekhibhodi eqinile nedeski, ukuze zonke izinto zakho zisebenzise isikhathi eside kunalokho obekulindelwe
Ukulandela ngejubane eliphezulu ukulandelela kwegeyimu yegundane-medion hera g3330
]Ukucaciswa okuphezulu. Sensor ye-Gaming Sensor PMW3330 enezinzwa ezisebenza kahle zilawula kahle ngokunembile futhi zivumelana nezidingo zakho zokuma okuqondile, okulula ukulawula zonke izinhlobo zemidlalo edumile.